वाणिज्य बैंक - बुढेसकालमा इच्छाराजको बिचल्ली ! सम्बन्धबिच्छेद पछि सिभिल बैंकको साढे १७ लाख कित्ता शेयर बिक्री - page 2
सिटिजन्स बैंकले सहयोगी विकाश बैंकलाई एक्वायर गर्ने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली ,२०७३ बमोजिम सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसेनल लिमिटेडले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “ख” वर्गको इजाजत प्राप्त सहयोगी विकाश बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति (एक्वायर) गर्ने गरी प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल जसरी पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको संख्या घटाउने अभियानमा लागेका छन् । यसका लागि आवश्यक परे गुण्डागर्दीको शैली अपनाउनसमेत उनी तत्पर देखिएका छन् । हिजो विहिबारदेखि गभर्नर नेपालको सरकारी संयन्त्र गुण्डागर्दीको शैलीमा विकास बैंकलाई थर्काउन अग्रसर भएको छ । राष्ट्र बैकको सुपरीवेक्षण विभागले राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई डाकेर फोर्स मर्जरमा जान तयार हुनू भन्ने फरमान जारी गरेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । बिग मर्जरको घनचक्करले यतिबेला नेपालको वित्तिय क्षेत्र तरंगित छ । अर्थतन्त्रका जानकार अधिकांशको बुझाई यसले वित्तिय क्षेत्रलाई थप तहसनहस पार्नेवाला छ । कसैकसैलाई भने यो काम नगरी भाको छैन । दुई तिहाईको केपी ओली सरकारलाई बिग मर्जर जीवनमरणको सवाल बनेको छ । केही माफिया र घरानियाँ व्यापारीको चाहना अनुरुप गर्न थालिएको बिग मर्जर ओली सरकारको सबैभन्दा ठूलो मुद्धा बनेको छ । ओलीको चाहनालाई शीरमा उचालेर हिंडेका छन् राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले । विगतमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नर नेपाल पद जोगाउन ओलीको मोहरा बनेका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । जसरी पनि मर्जर गराई छोड्ने एकोहोरो ढिपी लिएर हिडेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरुलाई १९ गते भित्र मर्जको प्रतिबद्धता लिएर आउन हुकुमी शैलीमा फरमान जारी गरेका छन् । आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न कस्सिएर लागेका गर्भनर नेपालको आगामी चैतमा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदैछ । केन्द्रीय बैंकको गभर्नर भएपछि सधैं बैंक तथा वित्तिय संंस्थाहरुको मर्जरको पक्षमा उभिएका उनी यस पटकको मौद्रिक नीतिमा आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने लिँडेढिपीमा व्यग्रतापुर्वक लागेका छन् ।	थप पढ्नुहोस्